Ama-Archives we-SMART DRUG - i-Shangke Chemical
Isigaba: I-SMART DRUG
1. Yini iPterostilbene? I-Pterostilbene yindlela ebalulekile yamakhemikhali ekhiqizwa ngokwemvelo empilweni yezitshalo ezithile njengendlela yokulwa nezifo. Le khompiyutha ifana nenye indawo eyaziwa ngokuthi yi-resveratrol futhi itholakala kalula ngefomu lokungezelela. Izithasiselo zePterostilbene zitholakala kakhulu nge-bioava. Lokhu kusho ukuthi zingangenwa kalula emzimbeni futhi ngokushesha futhi azonakaliswa lapho kugayishwa. I-Pterostilbene powder ingu ...
I-Lactoferrin Sibutsetelo Lactoferrin (LF) sikhona samaphrotheni wemvelo ubisi lwe-mamalia futhi sibonisa izakhiwo ezilwa namagciwane. Kusukela yaqala ngawo-60s, kube nezifundo eziningi ukuthola inani lokwelapha le-glycoprotein kanye neqhaza layo ekugomeni. Yize izingane ezisencane zingathola okungezelelweyo kusuka ukuncela omama bazo, i-lactoferrin powder eyenziwe ngentengiso iyatholakala kuyo yonke iminyaka. 1. Yini ...
1. Yini ama-Nootropics neSunifiram? 2. Isebenza kanjani iSunifiram? 3. Izinzuzo ezinhlanu ezinokwenzeka zeSunifiram 4. Ungayisebenzisa kanjani iSunifiram 5. I-Sunifiram Stack 6. Yimiphi imiphumela emibi yeSunifiram 7. Ngubani ongasebenzisa iSunifiram 8. Isiphetho Yiziphi i-Nootropics neSunifiram? Wake wacabanga ngokufaka amandla amakhulu ngokwememori, ukugxila, kanye nokuqamba kabusha? Ngezikhathi ezithile ...
1. Yini i-Epithalon Acetate? 2. I-Epithalon Acetate mechanism of action 3. Izicelo ze-Epithalon Acetate 4. I-Epithalon Acetate ukusetshenziswa kwereferensi 5. I-Epithalon Acetate izinzuzo 6. I-Epithalon Acetate imiphumela emibi 7. Izimo zokugcina ze-Epithalon Acetate 8. Ungayithenga kuphi isidakamizwa se-Epithalon acetate? Wake wezwa nge-Epithalon acetate? Ngabe ucwaninga ngakho futhi ufuna ukwazi ...
I-Fasoracetam ye-nootrop ethandwa kakhulu: isinikeza yona?
Mashi 7, 2019
Konke mayelana neFasoracetam 1. Umlando nomsuka weFasoracetam 2. I-Mechanism of Action 3. Izinzuzo Ezimangazayo zeFasoracetam 4. Isikisela Umthamo WeFasoracetam 5. Imiphumela emibi ejwayelekile yeFasoracetam 6. Ukubukeza komsebenzisi kanye nesipiliyoni sokusebenzisa iFasoracetam 7. Kanjani nokuthi Ungathenga kuphi I-Fasoracetam Nootropics ingenye yezimo ezivelayo namuhla ngeFasoracetam ehola. Ngenye ye ...
I-YK-11 Isikhathi se-Cycle kanye ne-Experience Feedback kusuka kubasebenzisi bangempela
1. Yini i-YK-11? 2. Isebenza kanjani i-YK-11? 3. Ukuqhathanisa i-YK-11 ne-Testosterone 4. Yiziphi izinzuzo ezingalindela ku-YK-11? 5. Izingozi ze-YK-11 uma zisetshenziswa 6. Kuhle kanjani ukwakhiwa komzimba? 7. Ngubani ongasebenzisa i-YK-11? 8. Umthamo ofanele we-YK-11 9. YK-11 uhhafu wempilo 10. Ubukeka kanjani umjikelezo wokwakha umzimba we-YK-11? 11. Imiphumela ye-YK-11 12. Ukubuyekezwa kwe-YK-11 ngabasebenzisi bangempela 13. YK-11 ngaphambi nangemva kokusebenzisa 14. Ungayithenga kuphi i-SARM YK-11 (YK-11) 15 ....